IRose yeTralee B&B (ibandakanya isidlo sakusasa esiphekiweyo) - I-Airbnb
IRose yeTralee B&B (ibandakanya isidlo sakusasa esiphekiweyo)
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguHelen
Indawo enelanga kunye nokungena kwintendelezo yabucala kwindawo ethandekayo yegadi. Igumbi lokuhlambela eliphangaleleyo kunye negumbi lokulala, elibandakanya isambatho sokuhamba kunye nefriji, umenzi wekofu, ijagi yombane kunye ne-microwave, ifanelekile kwabo balungiselela ukuya emitshatweni kunye neminye iminyhadala kwimizi yewayini ekufutshane.
Izixhobo zokutya kwigumbi kunye nentendelezo. I-TV enkulu yesikrini esisicaba. Abanikazi abanobubele. Ubumfihlo buhlonitshiwe. Uhambo olufutshane ukuya elunxwemeni, ukuqhuba okufutshane ukuya ezivenkileni, kwiindawo zokutyela, kwibhola ekhatywayo kunye neklabhu yegalufa.
Ayikaphononongwa njengoko le BnB isandula kuvulwa. Abanini bayavuya ukubonelela ngenkonzo ebalaseleyo. Intlonipho kunye nobumfihlo buqinisekisiwe.
4.95 · Izimvo eziyi-234
Ilokishi eselunxwemeni ezolileyo kodwa edumileyo kwi-Bellarine Peninsula, 28km ukusuka kwisixeko saseGeelong. Indawo yeholide edumileyo enamalwandle okuqubha akhuselweyo kunye nonxweme olunomtsalane olunepier ende. Indawo yeBarbecue kunye nepiknikhi, iipaki kunye neendawo zokuzonwabisa, iBowling kunye neeklabhu zegalufa. Isikhitshane sabahambi ngeenyawo sihamba phakathi kweDocklands nePortarlington yonke imihla. Kufuphi neendawo ezininzi zewayini. Kukho ibhasi yokukhenketha efumanekayo kwii-wineries ukusuka kwi-pier. Zininzi iikhefi kunye neendawo zokutyela ecaleni kwesitrato esikhulu. Idume ngoMnyhadala weMussel wonyaka kunye noMnyhadala weCeltic. Umgama omfutshane ukuya eQueenscliff/Sorrento ngesikhephe sesithuthi.
Iimbono ezimangalisayo ze-bay kunye neentaba ze-You Yang. Ukuloba okugqwesileyo ukusuka kumanzi amade / i-pier.
Hlonipha kwaye uqinisekise ubumfihlo kodwa uyafumaneka ukuba kuyimfuneko.